Tao amin’ny reniranon’Andriantany, Ankadivory Talatamaty no nahitana ny vatana mangatsiakan’i Avo, araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena eny an-toerana. Ny taratasin’ny dokotera avy ao amin’ny tobim-pitsaboana CSB II Talatamaty izay nanatanteraka ny fizahana, indrindra ny fandidiana faty na “Autopsie” ao amin’ny HJRA tanterahina amin’izao hanoratana ny vaovao izao no hanampy ny famotorana sy ny fanadihadiana lalina hotanterahin’ny mpitandro filaminana. Tsahivina hatrany, araka ny fampitam-baovaon’ny zandary fa ny talata heriny 4 jona sahabo tamin’ny 10 ora atoandro mahery no nanomboka tsy hita ilay zaza izay nonina teo Morondava Ambohibao, kaominina Antehiroka. Efa nisy vaovao diso nandeha teo amin’ny tambajotran-tserasera fa nisy fianakaviana nanafina ilay zaza. Nanatanteraka ny fisavana noho io ny mpitandro filaminana ka tsy nahita na inona na inona. Ho fanajana ny razana mbola eo ambohitra dia miandry izy ireo vao hametraka fitoriana noho ny fanalam-baraka azy ireo.